Madaxda Maamulka Jubaland oo Kismaayo ku soo dhaweeyay Wafdi ka socday Igad – SBC
Madaxda Maamulka Jubaland oo Kismaayo ku soo dhaweeyay Wafdi ka socday Igad
Garoonka diyaaradaha Magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hose waxaa maanta lagu soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayo xog hayaha guud ee Ururka ay ku midoobeen dolwadaha geeska Africa ee Igad lagu magacaabo Maxbuub Maxalin .
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Cusub ee Jubaland iyo masuuliyiin kale, Laamaha Amaanka magaalada Kismaayo, Ciidamada Midowga Africa ee ku sugan Kismayo iyo shacab farabadan ayaa wafdigan ku soo dhaweeyay Garoonka diyaaradaha Kismaayo.
“Waxaa noo yimid wafdigii balaarnaa ee ka socday Midowga Igad, garoonka diyaaradaha ayaan ku soo dhaweynay, waxaana u bilaabanaya shaqooyinkii ay u yimaadeen, iyagoo la kulmi doona qeybaha kala duwan ee bulshada” sidaasi waxaa laanta Afka Soomaaliga ee BBC u sheegay Madaxweyne ku xigeenka Jubaland C/laahi xaaji Ismaaciil Farataag.
Waxaa kale oo uu Mr Farataag intaais ku daray in ka maamul ahaan iyaguna ay la kulmi doonaan Wafdigan marka ay soo dhameystaan kulamada ay la leeyihiin qeybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka magaalada .
Waxay wafdigan ka socda Igad u tageen magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose xaqiiqo raadin ku aadan Xaaladaha kala duwan ee bulshada iyo taageerada Maamulka Jubaland, waxaana uu fulin u yahay go’aan ka soobaxay Shirkii dhowaan ka dhacya Dalka Itoobiya ee ay isugu yimaadeen madaxda Midowga Igad.
Maalin nimadii shalay ayay wafdigan soo gaareen gudaha magalaada Muqdisho caasimada dalka Waxayna halkaasi kula kulmeen Madaxda Dowlada Federaalka iyagoona kala hadlay ujeedooyinkooda.